Xog: Xildhibaan Geelle oo Imaaraadku uga wakiil ah dagaal lagu qaadayo DF - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xildhibaan Geelle oo Imaaraadku uga wakiil ah dagaal lagu qaadayo DF
Xog: Xildhibaan Geelle oo Imaaraadku uga wakiil ah dagaal lagu qaadayo DF
Muqdisho (Caasimadda Online) – Waxaa xalay iyo caawa ka socda magaalada Muqdisho qeybinta lacag laga soo qaaday shalay safaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho taasoo lagu abaal marinayo qaar ka tirsan xildhibaannadii codka siiyay Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo lacagtan ay ku wareejisay Safaaradda Imaaraadka ayaa u wakiishay qeybinteeda Xildhibaan Maxamed Jama Mursal Geelle, oo hore usoo noqday Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta, xiriir dhawna laleh Dowladda Itoobiya.
Xildhibaan Geelle, oo inta aanu siyaasadda Soomaaliya soo gelin, hore u ahaa sarkaal ku matala Dowladda Itoobiya Ururka IGAD, ayaa dhawr Xildhibaan noo xaqiijiyeen in lacagahan uu qeybinayo looga gol leeyahay in lagu dhiso kutlo ay ku midaysanyihiin xildhibaannada siyaasad ahaan kasoo horjeeda Xukuumadda.
Lacagaha uu Xildhibaan Geelle qeybinayo ayaa loo kala badiyay xildhibaannada iyada oo kan ugu sarreeyo la siiyay 15 kun, qaarkood 10 kun, kuwa ugu yarna 5 kun oo Doollarka Mareykanka ah.
“Waxaan xalay tagnay guriga Xildhibaan Geelle annaga oo 3 xildhibaan ah, waxaana nala siiyay xildhibaankiiba 5 kun oo Doollar. Balse waxaa la yaab nagu noqotay markii aan ogaannay xildhibaanno saaxiibadeenna ah oo la siiyay caawa 15 kun kiiba.” Sidaas waxaa Caasimadda Online u sheegay xildhibaan diiday inaan magaciisa xusno.
Tallaabadan cusub ayaa muujineysa wajiga cusub ee uu yeelanayo dagaalka ay Dowladda Imaaraadka Carabta ku dooneyso in ay ku kala dhantaasho midnimada Golaha Shacabka iyo wada shaqeynta laamaha fulinta iyo sharci dejinta.
Dhanka kale, waxaa usbuucyadii lasoo dhaafay booqasho ku tagay magaalada Dubai Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo kamid ah dadkii dabada ka riixayay ololaha ay Imaaraadku ku doonayeen in lagu doorto Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow.
La soco wixii arrimahan kasoo kordha Caasimadda Online.